युगसम्बाद साप्ताहिक - सकियो दशैं ! कतिले बुझे नारी शक्तिको महिमा र महत्व ? - गीता श्रेष्ठ
Thursday, 04.09.2020, 01:04pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 10.15.2019, 11:41am (GMT+5.5)
पौराणिक मान्यताको यो वास्तविकता लिपिबद्ध भएको छ । कुनै न कुनै चाडपर्वमा नारीलाई उच्च स्थान दिने गरेकै छौं तर यो चाडपर्वमा नै सीमित भएको पाइन्छ राज्यदेखि घरसम्म नै । त्यसैले त महिलाले आफ्नो शक्ति आफैंले चिन्न नसकेर आजभोलि महिला हेपिएको, दबिएको, दासत्व स्वीकार्न बाध्य भएको अनेक फुर्कावाला आरोप र टिप्पणी गर्ने पश्चिमाहरुको नाराको पछि कुदेर सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई निम्ता दिइरहेका छौं ।
यी भए पौराणिक कुरा र यिनै कुराहरुलाई मनन गर्ने हो भने महिले चर्चामाा ल्याउने गरिएका महिल अधिकारका समस्या स्वतः समाप्त भएर जान्छ । महिलामा शक्ति छ, ज्ञानन छ र धन पनि छ भने उनीहरु किन कमजोर र कसरी कमजोर ? दशैंमा शक्तिको रुपमा देवीको पूजा गर्ने, तिहारमा धनकी देवीका रुपमा लक्ष्मीको पूजा गर्ने र विद्याका लागि सरस्वतीको पूजा गर्ने हामी नेपालीहरुले यिनै त्रिरुप एक नारीलाई किन भेदभाव गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर सबैले आआफ्नै किसिमले खोज्ने हो भने घोकाइदिएको नाराको पछि लाग्नै पर्दैन ।
माथिका सन्दर्भहरु नेपाली समाजको पौराणिककालीन वास्तविकताा हो । अब कुरा गरौं आधुनिक कालको र आजभोलि उठेका महिला अधिकारको विषयमा । के अधिकारका नाममा पुरुषलाई गाली गर्ने अनि राज्य सत्ताले समान अधिकार दिएन भनेर प्रायोजित नारा लगाएकै भरमा महिला सशक्तिकरण हुन्छ ? नेपाली महिलाका लागि अहिलेको आवश्यकता के हो ? के गर्दा उनीहरुको परिवार र समाजमा स्थापित हुन मद्दत पुग्छ भन्नेतिर कसैको चासो गएको छैन । यसमा महिला कति दोषी, पुरुष कति दोषी अनि शासनसत्तामा बसेकाहरु कति भन्ने प्रश्न त छँदैछ ।
आज संविधानले महिलाा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्छ । के त्यसका लागि महिलालाई तयार गरिएको छ त ? निजामतीदेखि राजनीतिक तहसम्म महिला सहभागिताको सवालमा अहिले यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान पूरा गर्न राज्यले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न टाढा जानु पदैन ! संसदलाई हेरे पुग्छ । महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएपछि दलहरुले मनोनित गरेका महिला सांसदहरुको अवस्थालाई हेर्दा पुग्छ ।
महिलालाई आर्थिक–सामाजिक रुपमा सशक्त नबनाएसम्म संविधानले जस्तोसुकै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसले वाञ्छित उपलब्धि दिंदैन । सर्वप्रथम महिलामा शिक्षा र आर्थिक स्रोतमा पहुँच पु¥याउनुपर्दछ । उनीहरुको श्रमको गार्हस्थ उत्पादनमा कदर हुनुपर्छ । यी सामान्य कुराहरुको कदर गर्ने हो भने महिला अधिकार स्वतः स्थापित हुन्छ कानुनी र व्यवहारिक रुपमा ।
मानिसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको धर्म हो र जब धर्मले, शास्त्रले महिलालाई उच्च सम्मान गर्दै पुरुषले पनि स्तुति गर्नुपर्ने शक्तिको स्रोत मानेको छ भने महिला किन पछि हट्ने वा पर्ने ? सनातन वैदिक धर्मले मातृशक्तिको महिमाको गुणगानका साथै यो शक्तिलाई विशेष महत्व दिएको छ । शारदीय नवरात्रमा नवदुर्गाको साथै सचल कन्याको पनि पूजा गरिन्छ । यसरी पूजा गर्नेहरुले घरकी साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा र सरस्वतीलाई किन अधिकारविहीन बनाउने ?